बयान अघि छुट्टाछुट्टै बसेका रवि र युवराज बयान सकिएपछि पुनः एउटै कोठामा ! समय कसरी व्यतित गर्दै छन् त ? - Hamro Abhiyan
बयान अघि छुट्टाछुट्टै बसेका रवि र युवराज बयान सकिएपछि पुनः एउटै कोठामा ! समय कसरी व्यतित गर्दै छन् त ?
सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका सञ्चालक रवि लामिछाने साउन ३० गतेदेखि चितवन प्रहरीको हि*रासतमा छन् । हि*रासतभित्र रवि के गरिरहेका छन् भन्ने धेरैको चासोको विषय हुन सक्छ । भेटघाट गर्नका लागि आउनेहरुसँग भेटघाटबाहेकको समयमा रवि हि*रासतमै रहेका अन्य थुनुवाहरुसँगै लुँडो खेलेर समय बिताइरहेका छन् । बयान लिन थालेपछि छुट्टाछुट्टै बसेका रवि र युवराज बयान सकिएपछि पुनः एउटै कोठामा बस्न थालेका छन् । चो*री, ला*गूऔषध, सवारी ज्या*न मु*द्दाका आ*रोपितहरु उनीहरुसँगै रहेका छन्, जो उनीहरुका लुँडो खेल्ने साथी भएका छन् ।
पत्रकार रवि लामिछानेका समर्थकवि*रूद्ध चितवन प्रहरीले अभद्र दुव्र्य*वहारमा मु*द्दा चलाएको छ । रविको रि*हाइका लागि भएकोे प्रदर्शनमा खराब आचरण र व्य*वहार देखाएको भन्दै चितवन प्रहरीले हालसम्म २२ जनाविरूद्ध मु*द्दा चलाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डिएसपी एकनारायण कोइरालाले साउन ३२ गते पक्राउ परी मु*द्दा चलाइएका चार जना जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट ५ सय ध*रौटीमा छुटेको बताएका छन् । त्यस्तै, प्रहरीले भदौ २ गते भएको प्रदर्शनबाट १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुवि*रूद्ध म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको छ ।